Taliska Booliska Puntland oo soo saaray Amaro lagu sugayo Amniga Caasimada Puntland ee Garoowe. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Taliska Booliska Puntland oo soo saaray Amaro lagu sugayo Amniga Caasimada Puntland ee Garoowe.
Taliska Booliska Puntland oo soo saaray Amaro lagu sugayo Amniga Caasimada Puntland ee Garoowe.
September 12, 2019 - By: Mohamud Nadif
Sarreeye Gaas Muxuyadiin Axmed Muuse Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland oo shir jaraaid ku qabtay Magaalada Garoowe ayaa soo saaray awaamiir cusub oo lagu sugayo Amniga caasimada Puntland ee Garoowe, taliska ayaa ka hadlay hubka sharci darada ah ee magaalada lagu dhex-sito, bogcadaha hubka lagu ilaaliyo, ilaalada madaxda, goobaha lagu gado qaadka iyo dhalinyarada taleefoonada furata.
Ugu horayn taliyaha ayaa ka hadlay hubka lagu wato magaalada waxa uu sheegay in guud ahaan hubka sharci darada ah la mamnuucay, sidoo kale ciidamada amaanka ayaa la faray in ay qoryaha ka qaadaan askarigii aan ku jirin hawlgal, sidoo kale taliyuhu wuxuu fariin adag u diray dad uu sheegay in ay hub ku waardiyeeyaan bogcadaha, waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin arinkaas, hubkii lagu qabtona ay dawladu la wareegi doonto.
Taliska waxay sidoo kale mamnuuceen in wadooyinka qaar lagu gado qaadka ama laga furo meheradaha lagu qayilo ee loo yaqaan Merfish ” laga bilaabo 11-ka bisha September magaalada laga bilaabo barlamaanka ilaa Rugsan, ilaa dhinaca kale u leexo Wadada Meeraysane (Dr Jimcaale) ilaa jidka Sodonka intaa qaad laguma qadi karo marfashna lagama samayn karo, cid walba oo halkaa wax u yaaliin waa inay ka qaadataa waayo waxaa ka timid amni xumo”, ayuu yiri Sarreeye Gaas Muxuyadiin Axmed Muuse.
Taliyuhu ugu danbayn waxa uu waalidka ka codsay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ubbadkooda, cidii lagu qabato fal-denbiyeedna aysan waalidiin hadhaw ka daba imaan.